“(၂၆) နှစ်သားလေးနဲ့ လက်ထပ်ဖို့အတွက် တစ်ကိုယ်လုံး ခွဲစိပ်ပြုပြင်ခဲ့တဲ့ (၆၂)နှစ်အရွယ်အဖွားအို” – စွယ်စုံသုတ
အချစ်ဆိုတာ ဆန်းကျယ်တယ်လို့ ဆိုမလား။ ကြီးကောင်ကြီးမားကျမှ သူငယ်ပြန်တယ်လို့ ဆိုမလား။ ဒါမှမဟုတ် လူငယ်တွေ ဖြတ်လမ်းလိုက်တယ်လို့ အပြစ်တင်ရမလား။ တကယ်ပဲ အချစ်က အရာရာကို ကျော်ဖြတ်နိုင်သွားတယ်လို့ ဆိုရမလားမသိ။ ထူးထူးခြားခြားဖြစ်စဉ် တစ်ခုကတော့ ဗီယက်နမ် နိုင်ငံမှာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။.
အသက်(၆၂) အရွယ်မုဆိုးမ အိုကြီးက (၂၆)နှစ်အရွယ်လူပျို ကလေးနဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ဖို့အတွက် တစ်ကိုယ်လုံး ပလက်စတစ်ဆာဂျူရီလုပ်ပြီး မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
သမီး(၂)ယောက်နဲ့ အဖွားအို ၀မ်က သူမရဲ့ ခင်ပွန်းဆုံးသွားပြီး ကတည်းက ကော်ဖီဆိုင်နဲ့ တွဲထားတဲ့ ကုန်စုံဆိုင်လေးဖွင့်ကာ အသက်မွေ၀မ်းကျောင်း လုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ သူမအသက် (၆၀)ပြည့်တဲ့ (၂၀၁၈) ခုနှစ်လောက်မှာ သူမရဲ့ ဆိုင်ကိုပုံမှန်လာပြီး စားသောက် နေတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်က သူမကိုချစ်ခွင့်ပန်ခဲ့ပါတယ်။
ကောင်လေးနဲ့ သူမတို့ကိုရင်းနှီးနေတာ ကြာပေမဲ့ သူမက ကောင်လေးကို မောင်လေးလိုပဲ သဘောထားရာက သံယောဇဉ်တွေပိုခဲ့ပါတယ်။ (၂)နှစ်နီးပါးလောက်ချစ်ခွင့်ပန်နေတဲ့ ကောင်လေးရဲ့ ဇွဲကို အသိအမှတ်ပြု တဲ့အနေနဲ့ သူမက သူ့ကို လက်ခံခဲ့ပါတယ်။
ပတ်၀န်းကျင်ရဲ့ အတင်းအဖျင်းတွေ သွားပုတ်လေလွင့် ပြောစကားတွေကို ကျော်ဖြတ်ပြီး သူတို့ (၂)ဦးမင်္ဂလာ ဆောင်ဖို့အတွက် လုပ်လိုက်ကြပါတယ်။
မင်္ဂလာဆောင်မှာ ကောင်လေးဂုဏ်မငယ်အောင်လို့ သူမက မျက်နှာပြင်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို ဗီယက်နမ်ငွေ သန်းနဲ့ချီအကုန်ခံပြီး ပလက်စတစ်ဆာဂျယ်ရီ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ သတို့သားနဲ့ သတို့သမီးစုံတွဲက လူမြင်ကွင်းမှာ တင့်တင့်တယ်တယ် နဲ့ (၂)ကိုယ်ယှဉ်တွဲ နိုင်ပါပြီ။
“ ကျမကို ကောင်လေးနဲ့တွဲနေစဉ်အခိုက်မှာ အမျိုးမျိုး တိုက်ခိုက်ကြပါတယ်၊. စကားလုံးတွေက နားနဲ့ မဆံ့အောင်ကိုပဲ ကြားနေခဲ့ရပါတယ်၊ သမီးတွေလည်း ကျမကြောင့် အပြောခံခဲ့ရပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒါတွေက ခဏတာပါပဲ၊ အခုတော့ ကျမမှာ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ နွေးထွေးတဲ့ မိသားစုကလေးပြန်ရနေပါပြီ” လို့ သူမက ဗီယက်နမ် အိတ်စပတ် သတင်းစာ အင်တာဗျူး မှာဖြေခဲ့ပါတယ်။
ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ အစပြုတဲ့အရာတိုင်း ဝမ်းနည်းခြင်းနဲ့ အဆုံးသတ်ရတာ ဓမ္မတာပဲလား? မာရာဒိုနာ….
“လေဖြတ်နေတဲ့ အဖွားကလွဲပြီး တစ်မိသားစုလုံး ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရတဲ့ မိသားစုလေးရဲ့ စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ရပ်(ရုပ်သံ)”